Akhriso: Guddiga Farsamada ee ku shirsanaa magaalada Baydhabo oo shaaciyay in xal farsamo laga gaaray arrimihii la isku hayay – Kalfadhi
Akhriso: Guddiga Farsamada ee ku shirsanaa magaalada Baydhabo oo shaaciyay in xal farsamo laga gaaray arrimihii la isku hayay
February 17, 2021 Hassan Istiila
Guddiga Farsamada ee ka socday dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ku shirsanaa magaalada Baydhabo ayaa shaaciyay in xal laga gaaray qodobadii la isku hayay ee caqabada ku ahaa hirgelinta doorashada.
Hoos ka aqriso war-murtiyeedka.
GUDDIGA FARSAMADA ARRIMAHA DOORASHADA FEDERAALKA:
Baydhabo, Febaraayo 16, 2021; Shirka Guddiga Farsamada Arrimaha Doorashada Federaalka ee ku qabsoomay magaalada Baydhabo ee caasimadda kumeelgaarka ah ee Koonfur Galbeed 10-16-kii Febaraayo 2021 waxa uu ku soo dhammaaday guul. Guddiga oo ka duulaya mabaadi’da aasaasiga ah ee wadar ogol, isu tanaasul, is qancin iyo tixgalinta xaaladda dalka ayaa si qoto dheer uga dooday qodobbada caqabadda ku ahaa fulinta heshiiskii 17-kii Sebteembar 2020 iyo duruufaha ku xeeran qabsoomidda doorashooyinka Dawladda Federaalka Soomaaliya.
Guddigu waxay si gaar ah diiradda u saareen dhiraan-dhirinta farsamada iyo xal u helidda qodobbadan:
Cabashada laga muujiyey in qaar ka mid ah xubnaha Guddiga Doorashooyinka aysan waafaqsanayn habraacyada iyo shuruudaha xubinnimo ee Guddiga Doorashooyinka ee lagu qeexay heshiiskii 17-kii Sebteembar 2020, gaar ahaan in ay jiraan xubno ka tirsan Shaqaalaha Rayidka ah iyo Hay’adaha Amniga.
Xal u helidda Guddiga Doorashada kuraasta Somaliland.
Xaaladda Gobolka Gedo oo la xalliyey.
Adkaynta Qoondada Haweenka
Jadwalka qabsoomidda doorashada
Guddigu waxay xal farsamo oo gundhig u noqon kara qabsoomidda doorashada ka gaareen dhammaan qodobadaas kor kuxusan, waxayna Madaxda Golaha Wadatashiga Qaran u gudbiyeen soo jeedinta guddiga si ay u meel mariyaan.
Sidoo kale, Guddiga Farsamada Arrimaha Doorashadu waxay ugu baaqeen Madaxda Golaha Wadatashiga Qaran in ay shir isgu yimaaddaan 18 Febaraayo, 2021.
Guddigu waxay u mahadcelinayaan Madaxwayanaha Dawladda iyo shacabka reer Koonfur Galbeed soo dhawaynta iyo martigalinta Guddiga Farsamada.
Guddigu waxay sidoo kale u mahadcelinayaan Beesha Caalamka oo dadaalka joogtada ah ugu jirta sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho loo dhanyahay.
Waxaa la shaaciyay qodobadii ilaa iyo hadda looga hadlay shirka Guddiga Farsamada ee ka socda Baydhabo
Cabdi Xaashi “Madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisa dedaal adag ayey u galeen in aan laga hadlin arrinta doorashada xildhibaannada Somaliland
Warar kale oo la xiriira
Madaxweynaha Galmudug oo magaalada Dhuusamareeb ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo wakiilka QM
June 16, 2021 Hassan Istiila
Madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye QoorQoor ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ku qaabilay wafdi...
Madaxweynaha Jubaland iyo wakiilka QM oo ka wadahadlay arrimo ay kamid yihiin doorashooyinka
June 15, 2021 Hassan Istiila
Madaxweynaha Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam, ayaa maanta xarunta madaxtooyada ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayay wakiilka...
Golaha Midowga Musharaxiinta oo dalbadey in Ra’iisul Wasaaraha uu beddelo guddi uu magacaabay
June 14, 2021 Hassan Istiila
Midowga Musharaxiinta Madaxtinimada Soomaaliya oo soo saaray war-saxaafadeed, ayaa soo dhaweeyay guddiga uu ra’iisul wasaare Maxamed...
Madaxweyne Saciid Deni oo maanta furay kalfadhiga 48-aad ee Golaha Wakiillada ee baarlamaanka Puntland
Xildhibaanno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka oo kulan la qaatay waalidiinta carruurtooda ay ku maqanyihiin dalka Eretria
Guddiga Shuruucda & Caddaaladda ee baarlamaanka Puntland oo kulan la yeeshay Wasiirka Cadaaladda